Tag: kushambadzira ongororo | Martech Zone
Tag: kushambadzira kuongorora
CrowdTwist, mutengi kuvimbika mhinduro, uye Brand Innovators akaongorora 234 madhijitari vatengesi kuFortune mazana mashanu mabhenji kuti vaone kuti kudyidzana kwevatengi kunopindirana sei nezvirongwa zvekuvimbika. Vakagadzira iyi infographic, iyo Loyalty Landscape, saka vashambadzi vanogona kudzidza kuti kuvimbika kunoenderana sei neyakajairwa nzira yekutengesa yesangano. Hafu yezvibodzwa zvese atove nehurongwa hwakagadzwa nepo 500% vakati vaizowedzera bhajeti yavo muna 57 Nei Vatengesi Vachiisa Mari Zvakawanda muKutendeka Kwevatengi
Iwe pamwe wapindura hongu ... uye zvedu zvinonetsa futi. Kushaikwa kwesangano, kupatsanurwa uye kuora mwoyo ndiwo madingindira akakosha kubva pane zvakawanikwa neCross-Channel Kushambadzira uye Tekinoroji Ongororo, yakaburitswa neSignal (yaimbonzi BrightTag). Mhedzisiro yenyaya iyi inosimbisa chokwadi chekuti vatengesi zvikuru havanzwe kuti tech tech iri kuvabatsira kuti vabudirire mukushambadzira kwemuchinjiko-wevashambadzi urwo vatengi vari kutarisira kubva kumakemikari nhasi. Chiratidzo chakaongororwa 281 brand uye vamiririri vevashambadziri,